InfiniTime 1.0, firmware yePineTime smart watches | Linux Vakapindwa muropa
Iyo PINE64 yakavhurika sosi nharaunda yakavhurwa mazuva mazhinji apfuura kusunungurwa kweInfiniTime 1.0, inova iyo PineTime smartwatch yepamutemo firmware mairi zvinonzi kuishongedza neiyo nyowani firmware vhezheni kunoita iyo PineTime kutarisa chigadzirwa chakagadzirwa-chevashandisi vekupedzisira.
Iyo changelog inonongedzera kune yakakosha kugadziriswazve kweiyo interface, pamwe nekuvandudza kune manejimendi manejimendi uye gadziriso yemutyairi weTWI, iyo yakambokonzeresa tsaona mumitambo.
Wachi PineTime yakaunzwa muna Gumiguru 2019 uye yakachinja sePinePhone inoenderana mudziyo. MunaGunyana 2020, yemahara InfiniTime firmware, iyo kodhi iyo inoparadzirwa pasi peGPLv3 rezinesi, yakasarudzwa seye default firmware yePineTime.
Chigadzirwa ichi chakavakirwa paMCU NRF52832 (64 MHz) microcontroller uye yakagadzirirwa 512KB system Flash memory, 4MB Flash yedata remushandisi, 64KB RAM, 1.3-inch LCD skrini ine resolution ye 240 × 240 pixels., Accelerometer (inoshandiswa se pedometer), moyo wekubata sensor uye vibration mota. Iyo bhatiri yekuchaja (180 mAh) inokwana kwemazuva matatu kusvika mashanu ehupenyu hwebhatiri.
Kufanana nechero yechokwadi yakavhurwa sosi purojekiti, PineTime haina kungovakirwa pane imwechete nharaunda kana imwechete firmware. Kune mamwe akawanda mapurojekiti aripo izvozvi ari kusimukira uye ese akakodzera kutariswa nevashandisi base. Iyo firmware yepamberi pane iyo rondedzero ingangodaro Wasp-OS, iyo Micropython firmware. Iyo inopa yakawanda yeanoshanda uye iri nyore chaizvo kushandisa uye kuronga chirongwa kune mutauro wePython.
Ndinodawo kuratidza Pinetime-Lite, forogo yeJoaquimorg's InfiniTime. Joaquim akawedzera akawanda akanaka maficha uye zvinowedzeredzwa, uye akatopa basa rakawanda kune rake InfiniTime.
Firmware InfiniTime inoshandisa iyo FreeRTOS 10 chaiyo-nguva yekushandisa system, iyo LittleVGL 7 mifananidzo raibhurari uye iyo Bluetooth NimBLE 1.3.0 stack, nepo iyo firmware mutoro iri pamusoro peMCUBoot.
Iyo yekushandisa interface kodhi yakanyorwa muC ++ uye inosanganisira mabasa akadai sewachi (dijitari, analogog), chiitiko chekuita (moyo wekutarisa uye pedometer), iyo inoratidza zviziviso nezvezviitiko pane smartphone, tochi, kudzora mimhanzi kudzora pane smartphone, kuratidza mirairo kune browser, a stopwatch nemitambo miviri yakapusa (Paddle na2048).
Kubudikidza nezvirongwa, unogona kuona nguva iyo skrini rinodzima, iyo fomati yenguva, mamiriro ekumisikidza, chinja kupenya kwechiratidziri, ongorora mutero webhatiri uye iyo firmware vhezheni.
Pakati payo makuru maficha taura:
2 yakatarisa zviso: dijitari uye analoginen
Kwakasiyana kunyorera (stopwatch, kudzora mimhanzi, kufamba, kurova kwemoyo) nemitambo (Paddle na2048)
Zvirongwa zvevashandisi (kuratidza nguva, fomati yenguva, mamiriro ezvinhu)
OTA inogadziridza nerubatsiro rweMCUBoot-based FOSS bootloader
Chiyero chemwoyo chekutarisa uye nhanho kuverenga.
Mazuva 3-5 ehupenyu hwebhatiri
Nezve iyo firmware yekuvandudza, zvinotaurwa kuti izvi zvinogona kuvandudzwa kuburikidza neOTA meseji dzinotapurirana kubva ku-smartphone kuburikidza neBluetooth LE.
Kune rimwe divi, maererano nehukama hwekubatanidza uye kutonga kweiyo smart wachi mune zvisiri zvePine zvishandiso, zvinotaurwa kuti mumafoni uye makomputa zvinokwanisika kushandisa zvinoshandiswa Gadgetbridge yeApple, Amazfish (yeSailfish neLinux) uye Century (yeLinux) kudzora wachi.
Uyezve zvakare Izvo zvinotaurwa kuti kune rutsigiro rwekuyedza WebBLEWatch, webhu kunyorera yekuenzanisira wachi kubva kumabhurawuza anotsigira Bluetooth Web API.
Munyori weiyo firmware anoyeuka kuti pamusoro peInfiniTime pane dzimwe nzira dzinoverengeka, semuenzaniso pane firmware zvingasarudzwa zvichibva paZephyr, Mynewt OS, MbedOS, TinyGo, WaspOS (yakavakirwa paMicropython) uye PinetimeLite .
Finalmente kune avo vanofarira kuziva zvakawanda nezvazvo Nezve iyi firmware nyowani kana chishandiso, unogona kutarisa ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » InfiniTime 1.0, firmware yePineTime smart wachi